Fandinihan-Tena | EGW Writings
Toko 10 — Satana, Fahavalo MaheryToko 11 — Toetoetry ny AdyToko 12 — Ezaka Manokana Ataon’i SatanaToko 13 — Tsy Fanalan-Tsiny ny Ota ny Fakam-PanahyToko 14 — FaherezanaToko 15 — Ny Tempolin’ny FanahyToko 16 — Tsy Tompon’ny Tenanareo HianareoToko 17 — Fiovam-Po MarinaToko 18 — Torohevitra ho an’ny Zanakavavy NandeferanaToko 19 — Herin’ny Toetra Manoloana ny AdyToko 20 — Manohitra ny Fakam-PanahyToko 22 — Fampitandremana amin’ny Tsy FinoanaToko 23 — Faritra Malemy Iray
Tena ilaina ny fandinihan-tena akaiky ary eo ambany fahazavan’ny tenin’Andriamanitra, manadihady akaiky: Salama saina ve aho, sa tratry ny fahalovana ny foko? Nohavaozina ao amin’i Kristy ve aho sa mbola araka ny nofo, mitafy ivelany akanjo vaovao? Misikina ho toy ny manoloana ny fitsaran’Andriamanitra, dia jereo toy ny eo ambany fahazavan’Andriamanitra raha misy ota miafina, faharatsiana, sampy izay tsy mbola navelanao. Mivavaha, eny, mivavaha aloha, mba tsy ho voafitak’i Satana; mba tsy ho voatariky ny fanahy foana, tsy mihaino, tsy miraharaha ianao, ka hampangina ny feon’ny fieritreretana amin’ny fanaovana adidy ara-pivavahana.HAT 65.1
Iray amin’ny ota izay isan’ny famantarana ny andro farany ny firiavan’ireo milaza ny tenany ho Kristianina fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an’Andriamanitra. Anontanio tsara ny fanahinareo. Mitadiava amim-pitandremana. Vitsy tokoa ireo izay, aorian’ny fandinihan-tena mahatoky, hijery ny lanitra ka hilaza hoe: «Tsy isan’ireo izay voatanisa ireo aho. Tsy tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an’Andriamanitra aho.» Ho vitsy ireo izay afaka hiteny hoe: «Maty ny amin’izao tontolo izao aho, fa izay ivelomako ankehitriny dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra. Miara-miafina amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra ny fiainako, ary rehefa hiseho Kristy fiainako, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra aho».HAT 65.2
Ny fitiavana sy ny fahasoavan’Andriamanitra! Endrey, fahasoavana sarobidy! mihoatra noho ny volamena tsara, manondrotra sy manandratra ny fanahy mihoatra noho ny foto-kevitra hafa rehetra. Mampanakatra ny lanitra ny fo sy ny fitiavana. Raha miroboka amin’ny zavatra tsy maharitry ny tany, amin’ny fitadiavam-pahafinaretana, amin’ny hadalana ireo manodidina antsika, isika kosa raha mitady ny Mpamonjy dia amin’ny lanitra no mifandray; mitady an’Andriamanitra ny fanahy maniry famelan-keloka sy fiadanana, fahamarinana sy fahamasinana marina. Manova ny fanahy hanahaka an’i Kristy ny fifandraisana amin’Andriamanitra sy ny fibanjinana ny zavatra any ambony. — RH, 11 May 1886.HAT 65.3